Ama-motor Motors ajwayelekile we-Low-Voltage Motors ejwayelekile kanye ne-Motor Control
Umhlinzeki ojwayelekile we-motors wezezimboni ezisezingeni eliphansi
Amafektri Aqondile Wokuthengisa Kwezimoto Zangempela Zezimboni
Khetha ezinhlotsheni ezahlukene zemishini yezimboni. Thola imoto yakho yezimboni yezimoto kalula
Usebenzisa ucingo oluphambili nethusi esezingeni eliphakeme, cishe izinqubo eziyi-100, ukugaya kahle, vumela usebenzise ukuthula kwengqondo okuthe xaxa; i-rotor enembile ephezulu, ukusebenza kahle, ukunciphisa ukulahleka, ukonga amandla amaningi nokuqina; izigaxa zokugcina zensimbi ezisezingeni eliphakeme ukuze kuqinisekiswe ukuqina okusondele, i-rotor Smooth nokusebenza kahle.
Ngaphezulu kweminyaka yobungcweti ekusetshenzisweni kwemoto ye-indusrial, Sakha futhi sakha imikhiqizo yezimboni kanye nemikhiqizo yokunyakaza yezimakethe zezohwebo, ezezimboni, kanye ne-Aerospace nezokuVikela. Ama-motors ethu afaka umsebenzi wasepulazini, i-HP engxenyeni ethile, ubufakazi bokuqhuma, ama-ac & dc motors. ukuphatha imithwalo kanye nabathengisi abadingeka kakhulu; Izindawo zokukhiqiza nezinqubo. I-Alos, sinikela ngokulungiswa kwezimoto ze-servo, ukukhanda izimoto ezimbonini, ukuthengisa okusha nokuvuselelwa kwezimoto, insizakalo yokuthengisa ngemuva kanye nosizo lobuchwepheshe.
Imikhiqizo yokunyakaza yeServo
I-AC & DC Yezimboni Yezimoto
Izimoto ezincane ezisebenzayo
Imboni DC Ezimoto
Ubufakazi bokuqhuma kwezimboni zasezimboni
Imboni yezimoto ngokunemba okuphezulu
Sakhiqiza zonke izinhlobo zemoto futhi singakwazi nokwenza ngokwezifiso ama-motors ngokuya ngezidingo zomthengi. Sineminyaka eminingi yolwazi lokukhiqiza, umkhiqizo usebenzisa ukwakheka okungenamqondo, okwenza ukusebenza kokuqothuka kokushisa kube ngaphezulu kakhulu; kusetshenziswa shaft ephezulu ngokunemba, ukukhetha okuhle kwezinto ezibonakalayo, ukukhiqiza ngokunemba.
Ukuphakelwa kwezimoto ezimbonini, ukuthengiswa kwama-motors kagesi, 5 HP Air Compressor Electric Motor, izinsizakalo zezimoto zezimboni kanye nemikhiqizo yezimboni esiyisebenzelayo ibanzi kuma-siemens, i-WEG, i-TECO Leeson, iBaldor, i-ABB, iBison, iMarathon, i-KB, iGrove njll. Izinsizakalo zokulungisa izimoto zikagesi ezibandakanya izimboni, ukubuyisela emuva, ukushintsha, nokulungisa izimoto zikagesi. Ama-Motors Kagesi Afakwe Ngokuphelele (TEFC) - Isetshenzisiwe, Iyathengiswa, Ithengiwe, Ithengiswe, Ihwebelana, emhlabeni jikelele.
Sikhiqiza zonke izinhlobo zama-motors, futhi singenza nama-motors ngokuya ngezidingo zamakhasimende.Sinikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ephansi. Sithatha ikhwalithi njengenzuzo yethu futhi intengo ephansi ubuqotho.
Usizo lokufaka isicelo sezixazululo zezimboni nabakhi bemishini kuyinto yethu ekhethekile. Iminyaka eminingi kangaka ebuchwephesheni ifaka ama-Electric Motors, ama-Mechanical Gearboxes, ama-Pump Motors, i-Industrial Electrical Installation's & Controls, ukungena komoya kwezimboni, Insizakalo yamahora angama-24 ekuphenduleni yonke imibuzo yakho.
Singeminye yemikhiqizo ehamba phambili etholakala emakethe ethengisa futhi isebenze motors ezinkulu zezimboni ulayini ophelele wokuthengisa wezinhlobo ezahlukahlukene zama-motors kagesi kusuka kumandla aphansi, amandla wehhashi elicashile kuya kwelezinsimbi eziphezulu zamahhashi, aphakathi wonke ama-motor motor aphakeme angasetshenziselwa izimboni ezahlukahlukene izicelo.
Iminyaka yolwazi lokukhiqiza izimoto iwukukunikeza kuphela imoto esezingeni eliphakeme futhi eqinile.Ungaqiniseka ukuthi ikhwalithi yemoto yethu
Uma unemibuzo, ungaxhumana nathi, sizokujabulela ukukusiza! Ukuhlinzekwa kwamakhasimende ethu ku-inthanethi usuku lonke. Sinomshini omuhle wokubuya.
Sinabachwepheshe abambalwa basekhaya abanamakhono okuzimela ocwaningo nentuthuko, futhi singenye yezinkampani ezimbalwa eziqeqeshiwe ngakho-ke sicela uqiniseke
Imodeli ngayinye yemoto inentengo yayo, sizoba ngentengo eguqukayo ngokuya ngezidingo zomthengi, izaphulelo eziningi nokuningi.Sicela uthinte insizakalo yamakhasimende ngemininingwane.
Uma unemikhiqizo oyithandayo, woza uxhumane nathi!